Global Voices teny Malagasy » Miozolmana Iray Mpitarika Fivavahana, Manazava Ny Atao Hoe Maha-Amerikàna Amin’izao Andro Izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Miozolmana Iray Mpitarika Fivavahana, Manazava Ny Atao Hoe Maha-Amerikàna Amin'izao Andro Izao
Voadika ny 01 Aogositra 2016 3:28 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi Nandika avylavitra
Sokajy: Etazonia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Lehilahy iray Miozolmana mivavaka manoloana ny Trano Fotsy ao Washington DC. Sary nopihana tamin'ny Aprily 2013, an'ny mpampiasa Flickr Elvert Barnes. CC 2.0.
Ny hariva talohan'ny Andron'ny Fahaleovantena tao Etazonia, nizara fanamarihana iray nahavaky fo sy lahatsary nivantana tao amin'ny Facebook  i Khalid Latif, tale mpanatanteraka no sady mpitarika fivavahana ao amin'ny Ivontoerana Islamika ao amin'ny Anjerimanontolon'i New York (NYU), nanazavàny ny hoe ‘toy ny inona izany hoe Miozolmana ao Amerika’ izany.
Ny lahatsariny, izay efa voajery maherin'ny 161.000 sahady, dia tonga tao anatin'ny fotoana naha-faratampony ny fankahalàna Silamo ny kabary politika tsara lahatra sy ny fitomboan'ireo heloka bevava mamely ireo Miozolmana Amerikàna , sy ny fanaovana ho fenitra ny fanarahana maso ireo vondrom-piarahamonina Miozolmana ary toerana fivavahana .
Io maraina io, sary sy tantara maro manasongadina ireo heloka bevava feno fankahalàna natao tato anatin'ny ora 10 farany tamin'ireo tanàna Miozolmana manerana an'i Etazonia no nifohazako. Tanora Miozolmana roa nanaovana herisetra tao Brooklyn  New York, teo ivelan'ny maoske iray rehefa noendrinkendrehan'ireo mpanafika azy ho ‘mpampihorohoro’ ry zareo, Miozolmana iray mpitsabo nofandrihana sy notifirina tao  Houston Texas, nataonà lehilahy telo raha iny izy teny an-dàlana handeha hamonjy fivavahana maraina iny, ary Miozolmana iray hafa nodarohana tao Fort Pierce Florida, teo ivelan'ny Ivontoerana Islamika iray tao an-toerana mihitsy. Mbola ireo tantara voatatitra sy izay nitranga fotsiny tao anatin'ny iray andro lasa ireo. Fanampin'ireo maro izay notaterina tamin'ireo herinandro sy ireo volana maro lasa, ary ireo marobe izay tsy voatatitra.
Raha mahita zavatra ianareo, midika zavatra hafa ho antsika ankehitriny ny milaza zavatra. Raha mahita tsy fandeferana, mitenena. Raha mahita fankahalàna, mitenena. Raha mahita fanavakavahana, mitenena. Izaho sy ianao no tsy maintsy ho ny fiovàna ilain'ity izao tontolo izao ity.
Betsaka kokoa noho izay tsy hahitantsika fitarainana iray manohitra ireny hetsika ataon'ny mpitarika politika isankarazany ireny. Mbola betsaka no ho fanohizana ny hampiasàna ny finoana Silamo ho toy ny lalao baolina kitra politika hataon'ireo izay tsy manana tombontsoa marina amin-javatra hafa afa-tsy ny ho an'ny tenany irery ihany. Ny famelàna ny fankahalàna hahazo vàhana dia toa tsy niasa ho amin'ny vahaolana iray hampiatoana ny fankahalàna, fa toy ny tsy olana ny fahitàna azy.
Tafavoaka nihoatra ny faritry ny vondrom-piarahamonina tao NYU ny lazan'i Khalid Latif: nahazo ‘tia’ 122.042 ny pejiny Facebook  ary manana mpanjohy tsy azo tsinontsinoavina manerana izao tontolo izao izy. Tsy tapaka izy miresaka momba ny olan'ny fanavakavahana ary mampiseho firaisankina amin'ireo vondrom-piarahamonina hafa atao an-jorom-bàla ao Etazonia.
Raha toa ianareo mihevitra fa tezitra sy diso fanantenana fotsiny aho satria nisy Miozolmana voatafika, dia tena tsy takatrareo ilay izy. Noho ny maha-olona ireny olona ireny no ahatsapako izany. Mahatsapa ho an'ireny olona ireny aho satria mahatsapa ho an'i Orlando. Mahatsapa ho an'ireny olona ireny aho toy ny ahatsapako momba an'i Baltimore, Ferguson sy Chicago. Mahatsapa ho an'ireny olona ireny aho toy ny ahatsapako ny momba an'i Tiorkia, Bangladesh, Iràka ary Siria. Mahatsapa ho an'ny olona rehetra aho, izay mandalo karazana fijaliana na fifandonana. Nahita vitsy an'isa avy aminà sarangam-piarahamonina maro natao tsinontsinona hatrany hatrany isika, ary lasa tonga aminà teboka iray tsy nitondra ireny fanafihana ireny, ary na ny fahafatesana aza, mba ho entina hanekena ny soatoavina maha-olona an-dry zareo. Nahita isika fitifirana miharo fitifirana niseho teto amin'ity firenena ity, fitomboana mivantana miaraka amin'ny tsy fahatairan'ireo mpanao lalàna eto amintsika tsy miraharaha izay hiresaka momba ny fifehezana ny fitondràna fitaovam-piadiana. Ny hatezerako sy ny hadisoam-panantenako dia avy amin'ny zavamisy hoe lasa vao mainka velona ary tafiditra anaty dingan'ny fahalevonana ny mahaolona antsika, miaraka amin'ny fihetsika feno fankahalàna sy ny tsy fahombiazan'ny valinkafatra asetrintsika azy ary ny tsy firaharahiantsika.
Sary ao amin'ny mombamomba an'i Latif amin'ny Facebook: Sary : Priya Chandra.
i Latif no voalohany Imam na Miozolmana mpitarika fivavahana voatendry tao NYU. Roa taona taty aoriana, ny 2007, notendren'ny Ben'ny Tanànan'i New York, Michael Bloomberg, izy ho ny tanora indrindra tamin'ireo mpitarika fivavahana teo amin'ny tantaran'ny New York City Police Department. Vao 24 taona izy tamin'izay.
Miozolomana aho. Miasa ao amin'ny Toeram-pivavahan'ny Anjerimanontolo ao amin'ny NYU. Miasa amin'ny maha-mpitarika fivavahana ahy ao amin'ny New York City Police Department ary nomena ny laharan'ny inspektera. Nitety nisolo tena ny Departemantam-panjakana, nihaona tamin'ireo lohan'ny fiarovam-pirenena, ny zokiolona amin'ireo manampahefana ao amin'ny trano fotsy ary hatramin'ny Filoha Obama izy tenany mihitsy aza, nifampizara sehatra tamin'ireo olona toy ny Papa François sy ny Dalai lama. Mbola izaho no iray amin'ireo Miozolmana marobe eto amin'ity firenena ity notànana am-ponja, noraketina an-taratasy ny mombamomba azy ary narahana maso. Im-betsaka no efa notsidihan'ny FBI ny tranoko, izay nilazàna tamiko fa arahana maso aho satria toa diso tsara loatra tsy mampino. Arakaraky ny ahitàna ahy ho toy ny fanefitra, izaho no mbola voalohany hita ho toy ny poizina iray tsy amin'antony izay nofidiako ho ampiasaina hampisehoako ny finoana iainako. Tsy mety izany. Saingy mbola mino aho fa azontsika atao, ary ho tsaratsara kokoa.
Mba hahazoana fahasitranana, mila miaiky isika hoe marary. Izaho sy ianao no ampahany goavana amin'ny fitsaboana izay mety ho azontsika tanterahana. Ny hariva talohan'ny Andron'ny Fahaleovantenantsika, manana safidy hatao isika amin'ny maha-firenena antsika. Ao anatin'ny fotoana izay mbola iadiantsika hevitra momba ny ilàna na tsia ny handinihana ny hoe “Misy Lanjany Sa Tsia Ny Ain'ny Mainty”, manao fanambaràna ireo mpirotsaka hofidiana amin'ny toerana faratampony eto amin'ny firenena, fanambaràna izay toa manondro fa miresaka ho an'ireo sy amin'ireo vondrona Amerikàna voafidy monja ry zareo. Tsy azontsika atao intsony ny hamela ny vinantsika tsirairay ho atosiky ny milin'ny haino aman-jery izay mikatsaka ny hampientanentana sy mitoto ireo mpamaky sy mpijery aminà fitantaràna izay natao fotsiny hampizarazara sy hampifandramatra bebe kokoa aza. Amin'ny fahatongavantsika miaraka, tsy maintsy arendrika ireo fampitomboana tafahoatra ny feo mpanao an-tendrony. Ny tsy fahalalàn'ny ISIS na ny zo Repoblikàna, tsy azo atao intsony ho fototry ny fomba fiasantsika any anatin'ny fiarahamonina samihafa any. Tsy maintsy ianarantsika ny tena zavamisin'ny tolona atrehan'ireo manodidina antsika amin'ny tena fiarahana marina amin'izy ireny, mifanohitra amin'ny fijerena fotsiny ireo sary mitanila afafy amintsika isanandro. Tsy mila hoe vehivavy isika vao hijoro hiaro ny zon'ny vehivavy, na Miozolmana vao hijoro hiady ny zon'ny Miozolmana. Ny fanafihana iray mihatra amin'ny sasany amintsika dia fanafihana antsika rehetra. Nolazaiko izany ary mbola averiko indray, raha mahita zavatra ianareo, midika zavatra hafa ho antsika ankehitriny ny milaza zavatra. Raha mahita tsy fandeferana, mitenena. Raha mahita fankahalàna, mitenena. Raha mahita fanavakavahana, mitenena. Izaho sy ianao no tsy maintsy ho ny fiovàna ilain'ity izao tontolo izao ity. Tsy afaka ny hiharitra ny mangidy na ny tsy fihetsehana isika, izay mamela ireo olona tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan'ny tenany manokana hahomby. Tsy afaka manary fanantenana isika – ho tsara kokoa noho ny anio ny rahampitso raha mbola manatontosa hatrany ny anjaranao ianao. Misy lanjany ny fahatongavantsika miaraka androany raha toa isika manohy ny fiarahana rahampitso. Ndeha isika mba ho ilay antony izay mahatonga ny olona eto amin'ity izao tontolo izao ity hanohy hanana fanantenana, fa tsy sanatria ho ny antony mahatonga ny olona hisalasala.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/01/84936/
 nahavaky fo sy lahatsary nivantana tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/khalid.latif/videos/1575073509253652/
 naha-faratampony ny fankahalàna Silamo ny kabary politika tsara lahatra sy ny fitomboan'ireo heloka bevava mamely ireo Miozolmana Amerikàna: http://www.islamophobia.org/15-reports/164-islamophobia-in-the-2016-presidential-election.html
 vondrom-piarahamonina Miozolmana ary toerana fivavahana: https://www.aclu.org/factsheet-nypd-muslim-surveillance-program
 Tanora Miozolmana roa nanaovana herisetra tao Brooklyn: https://www.buzzfeed.com/talalansari/surveillance-video-shows-two-youths-visciouly-beaten-outside?utm_term=.df72Gm2p#.faLgm6gK
 Miozolmana iray mpitsabo nofandrihana sy notifirina tao: http://www.aljazeera.com/news/2016/07/texas-mosque-attack-160703143400200.html
 Miozolmana iray hafa nodarohana tao Fort Pierce Florida, : http://www.reuters.com/article/us-florida-shooting-mosque-idUSKCN0ZJ007
 nahazo ‘tia’ 122.042 ny pejiny Facebook: https://www.facebook.com/khalid.latif/?fref=ts